के हो जोर्नी खिइने समस्या? ५ लक्षण र उपचार
असार १२, २०७४ सोमवार १०:४७:०० प्रकाशित
के हो जोर्नी खिइने समस्या? यसका लक्षण र उपचार के होला ? - अार
अस्टिओ आर्थाइटिस् उमेर पुगेपछि मानिसमा देखा पर्ने एउटा समस्या हो । अस्टिओ आर्थाइटिस्लाई नेपालीमा जोर्नी खिइने समस्या भनिन्छ । यो समस्या बिशेषगरी महिनावारी बन्द भएका महिलामा देखा पर्छ।
जोर्नी खिइने समस्या गाउट, बाथ, जोर्नीमा चोटपटक र क्याल्सियमको कमी भएमा पनि देखिन्छ । चोटपटक लागेर जोर्नी खिइने समस्या जुनसुकै मानिसलाई पनि हुनसक्छ । जोर्नी मात्र खिइने समस्यालाई आर्थाइटिस् भनिन्छ।
तर उमेर पुगेपछि देखिने जोर्नी खिइने समस्यालाई भने अस्टिओ आर्थाइटिस् भनिन्छ । प्राय अस्टिओ आर्थाइटिस महिलामा ५०/६० र पुरुषमा ६०/७० बर्ष पुगेपछि देखिन्छ । शारीरिक बनावटका कारण पुरुषको तुलनामा महिलामा यो समस्या केही बर्ष अघि नै देखिन्छ । महिलाको जाँघ र तिघ्रामा बोसोको मात्रा बढी हुने भएकाले घुँडाको जोर्नी खिइने समस्या बढी देखिन्छ।
यो समस्याबाट बँच्न महिनावारी बन्द भएका महिलाले क्याल्सियमयुक्त खाना बढी खाने र नियमित व्यायाम गरेर तौल घटाउनु पर्छ । शारीरिक व्यायाम गर्दा दौड्ने होइन, समथर मैदानमा छिटोछिटो गरी हिँड्नु पर्छ।
हिँडडुल गर्न नसक्ने
दैनिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने
यो समस्यामा जोर्नी कति खिइएको छ, सोही डिग्रीका आधारमा उपचार गरिन्छ । यदि जोर्नी भर्खरै खिइन लागेको छ भने व्यायाम र फिजियोथेरापी गरेर समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । मध्यम अवस्थामा छ भने व्यायाम र फिजियोथेरापीसँंगै खिइएको जोर्नीमा हाइलोरोनिक एसिड भन्ने चिल्लो पदार्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ । तर आजभोलि हाइलोरोनीक एसिड नहाली स्टेरोइड हाल्ने गरेको पाइन्छ । मैले भने स्टेरोइड नहाल्ने सल्लाह दिने गरेको छु । किनकि स्टेराइडले जोर्नी भित्रका कुरकुरे हाड नै खाएर झन् कमजोर बनाउँछ।
कडा खालको खिइएको छ भने फिजियोथेरापीसहित सानो दुरबिनको सहयोगले जोर्नी सफा गर्नुपर्छ । यो बिधिलाई आर्थसकोपीक लवाज भनिन्छ । यो बिधिले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म समस्याको निराकरण हुन्छ । यो बिधिले पनि समस्या निको नभए जोर्नीको प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । जोर्नी प्रत्यारोपण भनेको खिइएको जोर्नी निकाली स्टिलको जोर्नी राख्नु हो । प्रत्यारोपण शरीरको जुनसुकै जोर्नीको पनि गर्न सकिन्छ।
घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण गर्दा दुबै जोर्नीको एकै पटक प्रत्यारोपण गर्नु राम्रो मानिन्छ । प्रत्यारोपण गर्दा ८ देखि १० दिन अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यो समय प्रत्यारोपण अघि बिरामी कति हिँड्न सक्छ वा कति व्यायाम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्छ । व्यायाम गर्न सक्ने बिरामी प्रत्यारोपणको अर्को दिन नै हिँड्न सक्छ।
- डा. प्रवीण नेपाल, बरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ
जोर्नीको दुखाइ : बाथरोग नभई चिकनगुनिया पो हो कि?
जोर्नी प्रत्यारोपणबारे यी कुरा जानौँ